ASUS ROG Telefoonka II: Noocyada iyo qiimaha rasmiga ah | Androidsis
ASUS ROG Phone II ayaa shalay la soo bandhigay, sida telefoonka ciyaarta ugu awoodda badan suuqa. Dhacdadeedii soo bandhigista waxaan awoodnay inaan ogaanno qeexitaankiisa oo buuxa, taasoo caddeynaysa inay tahay taleefannada casriga ah ee ugu awoodda badan iyo inay na siin doonto waxqabad wanaagsan. Ku saabsan taariikhda la sii deynayo iyo qiimaha suurtagalka ah, waxba lagama sheegin. In kasta oo ay ahayd in la filaa in aan sugno waxoogaa inyar ah.
Tani waa dhab ahaan waxa dhacay. Ku qiimaha noocyada kala duwan ee barnaamijkan 'ASUS ROG Phone II' Shiinaha. Marka ugu yaraan waxaan helnaa fikrad ah inta lacag ee taleefankan sumadda leh uu ku kacayo waddanka Aasiya. Marka lagu daro taariikhda ay ku bilaabmayso suuqan.
Munaasabaddan, nooca Shiinaha ayaa ka bilaabi doona Shiinaha lix nooc oo taleefanka ah. Afar ka mid ah horey ayaa looga sii ballansan karaa dalka, inkasta oo aysan ahayn ayaa la iibin doonaa illaa iyo 31-ka July. Waa wax lala yaabo in noocyo badan oo ka mid ah barnaamijkan 'ASUS ROG Phone II' lagu dhawaaqo, maadaama xagga RAM iyo keydinta uu jiro hal nooc oo taleefanka ah.
Waxaan kuu daayeynaa qiimaha noocyada kala duwan ee taleefanka, oo ilaa hadda la xaqiijiyay. Dhammaantood waa la ballansan karaa hadda si rasmi ah bogga internetka ee dukaamada Shiinaha.
ASUS ROG Phone II classic (12/128 GB): waxaa lagu bilaabay qiimo dhan 5.999 yuan (781 euro in la beddelo)
Daabacaadda Tencent Elite (8/128 GB) waxaa lagu qiimeeyaa 3.499 yuan (455 euro sicirka sarrifka)
Ejoy Peace ee daabacaadda Beijing oo leh 8/128 GB waxaa lagu qiimeeyaa 3.699 yuan (481 euro sicirka sarrifka)
Ku raaxayso Nabadda daabacaadda Beijing oo leh 12/128 GB waxaa lagu qiimeeyaa 6.199 yuan (807 euro sicirka sarrifka)
Kuwaas waxaa sii dheer, waxaa la filayaa in waxaa jira laba nooc oo kale oo heer sare ah suuqa. In kasta oo kiiskaaga aan hore loogu sii diyaarin meel ay ku keydsadaan, markaa waa inaan sugno si aan wax badan uga ogaano iyaga. Kuwani waa daabacaadda ba'an, oo qiimahoodu yahay 7.999 yuan (1042 euro qiimaha sarifka) iyo Esports Armor Version oo qiimihiisu yahay 12.999 yuan (qiimaha sarrifka ah oo ah 1.693 euro). Qaybta dambe waxay la socotaa qalab taxane ah, sida xeedho 30W iyo kiis caado ah.
Shakiga ayaa ah Waa kuwee noocyada ka mid ah barnaamijyadan 'ASUS ROG Phone II' ee laga bilaabayo Yurub, goorma iyo qiimaha ay ku yeelan doonaan bilowga la sheegay. Dhab ahaantii dhowr ka mid ah ayaa loo iibiyaa, in kasta oo aan durba arki karno inaysan raqiis ku noqon doonin macnahaas. Waxaan rajeyneynaa inaan dhowaan kaa maqalno.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » ASUS ROG Qiimaha telefoonka II iyo taariikhda la sii daayo ayaa la muujiyay
Huawei waxaa lagu eedeeyay inuu la shaqeynayay Kuuriyada Waqooyi